एक लाल समुद्र अवस्था बाट छुटकारा प्रार्थनाहरू प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स रातो समुद्री अवस्थाबाट छुटकारा प्रार्थनाहरू
यशैया: 43: २ जब तपाईं पानीमा जानुहुन्छ, म तपाईंसँग हुनेछु। जब तिमी नदीहरू तर्छौ तिमीलाई चोट लाग्दैन। जब तिमी आगोबाट हिंड्दछौ तिमीलाई जलाउने छैन। तिमीसित आगोको ज्वाला दन्किने छैन।
आज हामी रातो समुद्री अवस्थाबाट छुटकारा प्रार्थना हेर्नेछौं। रातो समुद्री अवस्था के हो? यो तब हुन्छ जब तपाईं आफैंलाई निराशाजनक स्थितिमा पाउनुहुन्छ, जब तपाईं फँसिरहनुभएको हुन्छ र तपाईंलाई मार्ग थाहा छैन जस्तो देखिन्छ। रातो समुद्री अवस्था तब हुन्छ जब तपाई जीवनमा ईट्टाको पर्खालमा हिर्काउनुहुन्छ वा तपाईको जीवनको अन्त्य हुन्छ। रातो समुद्री अवस्था मानव रूपले हुन्छ असम्भव अवस्था, जहाँ तपाईंलाई थाहा छ कि केवल भगवानले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ समाचार यो हो, मानिसमा जे असम्भव छ त्यो परमेश्वरसँग सम्भव छ। मानिस के गर्न सक्दैन, भगवान तनाव बिना यो गर्नेछ। यो छुटकारा प्रार्थनाहरूले तपाईंलाई परमेश्वरको असीमित बचत शक्तिमा जोड्दछ, यसले तपाईंलाई प्रार्थना गर्न र तपाईंको प्रार्थनाको लागि अलौकिक परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ। आज तपाईंले आफूलाई लाल समुद्रको अवस्था जस्तो देखिए पनि स्वर्गका परमेश्वरले तपाईंलाई येशू ख्रीष्टको नाममा ठूलो विजय दिनुहुनेछ।
प्रस्थान १ 14 को पुस्तकमा, हामी इजरायलका बच्चाहरू रातो समुद्र पार गर्ने वास्तविक कथा देख्छौं। सुरुमा यो असम्भव कार्य जस्तो देखिन्थ्यो, यस्तो लाग्थ्यो कि त्यहाँ कहिल्यै उम्कने बाटो थिएन। तिनीहरूको पछाडि जहाँ क्रोधित रगतको तिर्खा मिश्रीहरू, तिनीहरूतिर आउँदै थिए, अगाडि एउटा अन्तहीन रातो समुद्र थियो तर प्रभुले मोशालाई अगाडि बढ्न लगाउनु भयो, उहाँले मोशालाई आफ्नो लहुरो देख्न अगाडि बढाउने आज्ञा गर्नुभयो, र उनीहरूले समुद्रमा बाटो लाग्ने छन्। मोशाले गरे र समुद्रले उनीहरूलाई क्रूसमा बाटो तुल्यायो, कस्तो ठूलो आश्चर्यकर्म !!!, तर यो त्यहाँ रोकिएन, भगवानले केटाकेटीलाई आक्रमण गर्न समुद्र पार गर्ने प्रयास गर्दा ती नै मिश्री सेनाले त्यही समुद्रलाई डुबायो। अब यो प्रकाश तपाईको साझा सत्यबाट तपाईसंग बाँड्न चाहान्छु, समुद्री भाग भयो जब मोसेजले आफ्नो स्टाफलाई तन्काउँछ, यसको अर्थ प्रार्थना हो, यदि तपाई आफ्नो लाल समुद्री भागका लागि तपाईका लागि बाटो देख्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले यसलाई आदेश दिनु पर्छ। प्रार्थनाको शक्ति मार्फत। मोसेहरूले प्रार्थना नगरेसम्म समुद्रले बाटो दिएन। साथै, सबै इस्त्रेलीहरूले सफलतापूर्वक रातो समुद्र पार गरे पछि, शत्रुले उनीहरूलाई पछ्यायो, तर मोसेले आफ्नो लहुरो फेरि फिंजाए र समुद्रले सबै मिश्रीहरूलाई डुबायो। यसले हामीलाई के भन्छ ,? जब शैतानले हामीलाई नाश गर्न चुनौतिहरू पठाउँदछ, तब हामीसँग प्रार्थनाको मार्फत शत्रुको बिरूद्ध उल्टो गर्ने शक्ति हुन्छ। जब तपाईं रातो समुद्रको अवस्थाबाट यस छुटकाराको प्रार्थनामा संलग्न हुनुहुन्छ, तपाईंको रातमा खडा प्रत्येक लाल समुद्रले तपाईंलाई येशूको नाममा जान दिन्छ। तपाईंको जीवन पछि सबै शत्रुहरु येशू ख्रीष्टको नाममा डुबाउनु पर्छ।
१. येशूको नाममा मेरो जीवनको पछाडि फर्कने प्रत्येक चक्रलाई टुक्रा-टुक्रा पारियोस्
२. मेरो सबै गोल्यतले येशूको नाममा आगोको ढु stones्गा लिन सकून्
Against. मेरो विरुद्धमा भएका सबै शैतानी परामर्शहरू, येशूको नाममा विच्छेदन गर्नुहोस्
Me. मेरो विरुद्धमा सबै शैतानी मुठभेडहरू, येशूको नाममा निराश हुनुहोस्
Against. म येशूको विरुद्धमा नपुंसक मेरो विरुद्ध फैशनको हरेक हतियार प्रस्तुत गर्दछु
Me. मेरो विरुद्धमा काम गर्ने प्रत्येक अनुगमन र नियामक ग्याजेट येशूको नाममा नष्ट हुनेछ।
I. म येशूको नाममा शत्रुको महिमा गर्न आँसु बगाउन इन्कार गर्छु
I. म येशूको नाममा मेरो जीवनमा हरेक अस्पष्ट आत्मालाई निस्तारित गर्दछु
My। म मेरो जीवनको हरेक क्षेत्रमा येशुको नाममा मेरो सफलताको हरेक विपक्षलाई पक्षाघात गर्दछु
१०. मेरो वित्तविरूद्ध बनाइएको प्रत्येक वित्तीय ताबूत, येशूको नाममा टुक्रा-टुक्रा पार्नु
११. म आफ्नो जीवनमा बोक्सीविद्याको हरेक पकड येशूको नाममा भत्काउँछु
१२. सबै प्रतिकूल परिस्थितिहरूले मलाई पिरोल्छ, येशूको नाममा मलाई अनुमोदन दिन आफूलाई सजिलै स्वीकार्न थाल्नुहोस्
१ life. मेरो जीवनको हरेक विभागमा शैतानी मुठभेडको हरेक पहाड अब येशूको नाममा चुर्लुम्मै डुबे
१ life. मेरो जीवनको हरेक विभागमा असम्भवको प्रत्येक पहाड, अब येशूको नाममा खस्कन्छ
१ lord हे प्रभु, येशूको नाममा मेरा शत्रुहरूसामु मलाई चीलको पखेटामा लैजानुहोस्
१.. हे प्रभु, अचानक येशूको लामा मेरा सबै अत्याचारीहरूको लाज होस्।
१ Every. सबै शक्ति, मेरो आत्मा सिंहको जस्तै फाड्ने योजना गर्दै, येशूको नाममा भत्काइनेछ।
१ Father. हे बुबा, येशूका नाममा हे प्रभु, दुष्टको खराबीको अन्त होस्।
हे परमेश्वर, शत्रुको बिरूद्ध मृत्युको औजारहरू तयार गर्नुहोस्, येशूको नाममा।
हे परमेश्वर, तपाईंको काँडहरू मेरो नाममा सताउनेहरूका विरुद्धमा नियुक्त गर्नुहोस्, येशूको नाममा।
Prosper१. अभिषेक गर्नलाई समृद्धि, ममाथि अब धेरै पल्ट येशूको नाममा खस्नु।
अघिल्लो लेखमासपना मा यौन सम्बन्धको विरुद्ध प्रार्थना
अर्को लेखमादुष्ट फलहरू विरूद्ध शक्तिशाली प्रार्थना घोषणा
शेरी हेस्टर नोभेम्बर २२, २०१ At अपराह्न २:१:27 बजे
कृपया मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहोस् मलाई तपाईंको सहयोगको आवश्यकता छ मलाई साँच्चिकै ईश्वरको प्रेम चाहिन्छ
मिस फेब्रुअरी २,, २०२० बिहान २:१:7 बिहान
ईश्वरको वचनमा खोजी गर्नुहोस् र तपाईंको लागि परमेश्वरको वचन निजीकृत गर्नुहोस्, विशेष गरी तपाईंले सामना गरिरहनु भएको अवस्था। छिटो, प्रार्थना, प्रशंसा र नियमित रूपमा परमेश्वरको उपासना। तपाईं सुत्नुहुँदा बाइबल शास्त्रपदहरू बजाउन दिनुहोस्, सायद शोफरहरू र शुद्ध वीणा संगीतको झण्डा। तपाईंले सम्झौता त्याग्न सक्नुहुनेछ, दैनिक पश्चाताप गर्नुहोस्, तपाईंको पिता-पुर्खाले गरेको कामका लागि पश्चाताप गर्नुहोस्, तपाईंको आफन्तहरू र तपाईं। यशैया 53 61 र via१ मार्फत येशूले तपाईंको लागि के गर्नुभयो भन्नुहोस्, भजन 91 १, 31१ र २ declare घोषणा गर्नुहोस्। दिन र रात तपाईंको बाइबल पढ्ने प्रयास गर्नुहोस्। दिनहुँ येशूको नामको प्रशंसा गर्नुहोस्। यदि तपाईं बचत गर्नुभएको छैन भने, शैतान र कुनै पनि सम्बन्धहरू त्यागेर मुक्तिको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईंले सम्पर्कको ठाउँहरू हटाउनका लागि तपाईंले आफूसँग भएका चीजहरू रद्दीटोकरीमा राख्नुपर्दछ। त्यहाँ बोक्सीविद्या, खराब वेदीहरू र तपाईंको बिरूद्ध आउन सक्छ। भगवानसँग सबै अधिकार र शक्ति छ, शैतानको होइन। सराप १०१, व्हिटफिल्ड ह्यारिंगटन, केभिन एलए इविंग र जोइ ब्लेयरलाई तोड्दै यूट्यूब च्यानलहरू जाँच गर्नुहोस्।
Open० प्रार्थना अंकहरू खुला स्वर्गहरूका लागि
Pray० प्रार्थना पोइन्टहरू खराब सपनाहरू रद्द गर्नका लागि
भ्रम को आत्माको बिरूद्ध प्रार्थना